Asusu Igbo Archives - IGBO DEFENDER
Category: Asusu Igbo
Innoson, ndi na eweputa mmanụ ugbọ na gas enwetala oghere mmanụ (itenani) 9 dị na mba Sierra Leone – ntuli aka mpaghara nke ndị dike mmanụ dị ka Shell BP na-achịkarị. Ogige mmanụ ahụ dị na South, n’akụkụ ókèala Sierra Leone na Liberia.
Innoson meriri na asambodo asambodo gbara agba nke ukwuu. Ọ gbara aka megide ụlọ ọrụ isii ọzọ. Ozi sitere na Energy Voice steeti kwuru na Innoson meriri mmanụ Blocks 96, 97, 114, 115, 116, 117, 133, 134 na 135. companylọ ọrụ ọzọ, Cluff Energy meriri Blocks 23, 24, 25, 36, 37, 38, 39, 54, 55, 56, 57, 74, 75, 94 na 95.
Gụkwuo: N’agbanyeghị mmegide sitere n’aka gọọmentị, Facebook na-aga n’ihu na Libra Cryptocurrency
Ihe mmepe a na egosiputa nnabata buru ibu na Innoson Group. A maara Innoson ihe maka mmepụta ụgbọ. Tupu nke a, ha sụ ụzọ ọhụụ eji achịkọta ọgba tum tum na Nigeria akpọrọ CKD. CKD pụtara ngwongwo agbachijuru agbachi.
Site na ndekọ Innoson banyere ịdị mma, ọ gaghị abụ ihe ijuanya ma ọ bụrụ na ọ malitere inye Shells na Totals nke ụwa a ịgba ọsọ maka ego ha n’oge na-adịghị anya.
N’oge na-adịbeghị anya, Innoson gbasawanyere ụdị ụgbọ ala ya na osisi ọzọ na Nnewi. Igwe nke Nnewi nọ ya. Fobịaru mmanụ mmanụ na Sierra Leone nwere ike ịbụ usoro. E nwere asịrị na Innoson nwere ike iwulite ụgbọ ala anaghị akwụ ụgwọ maka mba ọdịda anyanwụ Afrịka.
Akụkọ yiri ya.